Mpanamboatra sy mpamatsy POE Switch China POE Switch Factory
Product Describle Ny switch PoE dia manome herinaratra sy angona avy amin'ny teboka iray, amin'ny alàlan'ny Power over Ethernet (PoE) amin'ny tariby Cat-5 tokana. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny rohy 10 / 100Mbps ary manome hery IEEE 802.3af amin'ny indostria. Ny algorithm alàlan'ny auto-sensing advanced dia manome hery an'ireo fitaovana farany 802.3af, Ho fanampin'izany, ny switch PoE dia mamaritra ho azy ny takiana PoE, ny hafainganana, ny duplex ary ny karazan-tariby mampiasa Auto Uplink. Mora ny miasa sy azo antoka. Ny switch PoE dia mety amin'ny famoahana fitaovana PoE toy ...
10/100 / 1000M Mitokana PoE Splitter Cable 4812GB
Famaritana ara-teknika Anaran'ny vokatra 10/100 / 1000M PoE Splitter Cable Model an'ny vokatra 4812GB Power Supply Type 1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-) famatsiana herinaratra PoE TOSIKARATRA fampidirana 44-57V DC Voltage Output 12V DC Output ankehitriny 1.25A (MAX) Connector 1x RJ45 seranan-tsambo 1x RJ45 output port 1x DC output port Network Medium Cat5 ( UTP) na bebe kokoa Protocol IEEE 802.3 i 10 BASE-T IEEE 802.3 u 100 BASE-TX IEEE 802.3 x Control Flow IEEE 802.3 af Maherin'ny Ethernet Rate 10/100 / 1000M ...
10 / 100M Mitokana PoE Splitter Cable 4812G
Famaritana ara-teknika Anaran'ny vokatra 10 / 100M PoE Splitter Cable Product Model 4812G Power Supply Type 1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-) herinaratra PoE TOSIKARATRA fampidirana 44- 57V DC Voltage Output 12V DC Output ankehitriny 1.25A (MAX) Connector 1x RJ45 port fampidirana 1x RJ45 port port 1x DC output port Network Medium Cat5 (UTP) na bebe kokoa Protokol IEEE 802.3 i 10 BASE-T IEEE 802.3 u 100 BASE-TX IEEE 802.3 x Control Flow IEEE 802.3 amin'ny fahefana mihoatra ny tahan'ny Ethernet 10 / 100M LED Status P ...
24 Port 10/100 / 1000M POE Switch- (24 + 4) 2422GB (Tohano 1U Standard rack)
Ny switch PoE dia manome herinaratra sy angona avy amin'ny teboka tokana, amin'ny alàlan'ny Power over Ethernet (PoE) amin'ny tariby Cat-5 tokana. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny rohy 10/100 / 1000Mbps ary manome hery IEEE 802.3af amin'ny indostria. Ny algorithm alàlan'ny auto-sensing advanced dia manome hery an'ireo fitaovana farany 802.3af, Ho fanampin'izany, ny switch PoE dia mamaritra ho azy ny takiana PoE, ny hafainganana, ny duplex ary ny karazan-tariby mampiasa Auto Uplink. Mora ny miasa sy azo antoka. Ny switch PoE dia mety amin'ny famoahana fitaovana PoE toy ny fakantsary IP ...
Ny switch PoE dia manome herinaratra sy angona avy amin'ny teboka tokana, amin'ny alàlan'ny Power over Ethernet (PoE) amin'ny tariby Cat-5 tokana. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny rohy 10 / 100Mbps ary manome hery IEEE 802.3af amin'ny indostria. Ny algorithm alàlan'ny auto-sensing advanced dia manome hery an'ireo fitaovana farany 802.3af, Ho fanampin'izany, ny switch PoE dia mamaritra ho azy ny takiana PoE, ny hafainganana, ny duplex ary ny karazan-tariby mampiasa Auto Uplink. Mora ny miasa sy azo antoka. Ny switch PoE dia mety amin'ny famoahana fitaovana PoE toy ny fakantsary IP, WLA ...
16 Port GIGABIT ACTIVE POE Switch- (16 + 3) 1621GB (Tohano 1U Standard rack)
12 Port 10 / 100M MIASA POE Switch (10 + 2) 1012B
8 Port 10 / 100M MIASA POE Switch- (8 + 2) 1010B